Luka 7: 36-50 - UYesu Uthanjiswa Ngumfazi onesono
Umfazi ubonisa uthando olungathandabuzekiyo ngenxa yokuba ezininzi izono zakhe zixolelwa
Ibali lifumaneka kuLuka 7: 36-50.
UYesu Uthanjiswa Ngumfazi Owonayo-Ingxelo Inkcazo:
Xa engena endlwini kaSimon umFarisi ukuze adle, uYesu uthanjiswe ngumfazi wesono, kwaye uSimon ufunda inyaniso ebalulekileyo.
Konke ebulungiseleli bakhe bobulungiseleli, uYesu Kristu wafumana inzondo evela kwiqela lenkolo elaziwa ngokuba ngabaFarisi. Nangona kunjalo, uYesu wamkela isimemo sikaSimon sokuba sidle, mhlawumbi sicinga ukuba lo mntu unokuba nengqondo evulekile kwiindaba ezilungileyo, njengoNikodemo .
Umfazi ongaqanjwanga ngegama elithi "owayekhokele ubomi besono kuloo dolophu" wafunda uYesu wayesekhaya likaSimon waza wazisa ne-alabaster ingqayi yeqhumiso. Wenyuka emva kukaYesu, ekhala, wancinca iinyawo zakhe ngeenyembezi zakhe. Emva koko wazisula ngeenwele zakhe, wamanga ngeenyawo zakhe, wathululela ioli exabisekileyo phezu kwabo.
USimon wayazi le ntokazi kunye nodumo lwakhe. Wayebuza ukuba uYesu wayengumprofeti kuba umNazarete wayengazi konke ngaye.
UYesu wathabatha ithuba lokuba afundise uSimon nabanye ababenomfanekiso omfutshane.
Amadoda amabini ahlawulisa imali kumntu othile. Omnye wayemhlawulisa iidenariyo ezingamakhulu amahlanu, kunye namashumi amahlanu, "(uYesu wathi.)" Akukho namnye kubo owayenayo imali yokumbuyisela yona, ngoko wawacima amatyala abo bobabini. Ngubani na oya kumthanda ngakumbi? "( Luka 7: 41-42, NIV )
USimon waphendula wathi, "Lowo owayenetyala elikhulu likhansekile." UYesu wavuma. Emva koko uYesu wafanisa into eyenziwa ngumfazi lowo kwaye uSimon waphosisa:
"Uyabona lo mfazi? Ndangena endlwini yakho. Awuzange unginike namanzi ezinyawo zam, kodwa wazinzisa iinyawo zam ngeenyembezi zakhe waza wazisula ngeenwele zakhe. Awungandanga kumanga, kodwa lo mfazi, ukususela ngexesha ndingena ngalo, akayekanga ukumanga zam inyawo. Awuzange ubeke ioli phezu kwentloko yam, kodwa uye wathela ioli phezu kwam. "(Luka 7: 44-46, NIV )
Ngaloo ndlela, uYesu wabatsho ukuba izono ezininzi zeentombi zaxolelwa ngenxa yokuba wayemthanda kakhulu. Abo banokuxolelwa amancinci amancinci, wongezelela.
Ukubuyela kumfazi kwakhona, uYesu wamxelela ukuba izono zakhe zaxolelwa. Ezinye iindwendwe zazibuza ukuba ngubani uYesu, ukuxolela izono.
UYesu wathi kumfazi, "Ukholo lwakho lukulondolozile; hamba ngoxolo. "(Luka 7:50, NIV )
Amanqaku anomdla kwibali:
Eli qhe lekile lididekile ngendoda efanayo yowesifazane otyanjisa inyawo zikaYesu, echazwe kuMateyu 26: 6-13, Marko 14: 3-9, kunye noYohane 12: 1-8. Nangona kunjalo, kweso siqwenga, isidlo senzeke endlwini kaSimon onoqhenqa. USimon wayengumYuda oqhelekileyo ngekhulu lokuqala. Enyanisweni, uYesu wayenemimandla emibili phakathi kwabapostile bakhe: uSimon Petros noSimon umZealot . Indwendwe yaseSimon yaseLeyta yayiseBhetani, kwaye uYohane ubonisa ukuba umfazi njengoMariya, udade kaLazaro , lowo uYesu wamvusa kwabafileyo . Akukho nkcazelo yesono. Ekugqibeleni, kwindaba kaLuka, umfazi uthabatha uYesu ngaphandle kwothando. UMariya waseBhetani uyamgcoba malunga neveki ngaphambi kokubethelelwa kwakhe , ngenxa yokungcwaba kwakhe.
Abanye abaphengululi beBhayibhile bayichaza ngephutha umfazi oseburhulumenteni kaLuka njengoMary Magdalene , kodwa akukho ubungqina bokuxhasa oko. Ngoxa uYesu ekhuphe iidemon ezisixhenxe eMagdalene, iBhayibhile ayinxulumani nokuba nesono. Ngaphezu koko, ingcamango yokuba uMary Magdalene wayeyindoda engunongogo, yayingumongo wexesha eliphakathi, engasixhaswa yiZibhalo.
I-Alabaster yayimhlophe, ilitye le-marble eliqhelekileyo kwaSirayeli. Yayisetyenziswe njengesitya sokugcoba kunye namafutha, i-lid ephawulwe nge-wax ukuze kugcinwe ukuba okuqukethwe kungene.
Isibhedlele sasemandulo saseMpumalanga Ephakathi sasifuna ukuba isivakashi sisamkele ngobusana obumnandi, ukuhlamba iinyawo kunye neoli ecoliweyo. USimon waqhekeza ezo zihokelo zentlonipho. UYesu wachaza ukuba lo wesibini wayesazi izono zakhe kunye noxabiso lokuxolelwa . UmFarisi, ngakolunye uhlangothi, wayezikhukhumeza ngokomoya, ekholelwa ukuba wayengenasono sokuxolelwa.
UKristu wanikela ngobomi bakhe ukukusindisa ezonweni zakho . Ingaba impendulo yakho, njengolu bhinqa, ukuthobeka, ukubulela kunye nothando olungathinteliyo?
(Imithombo: IVangeli le-Fourfold , uJW McGarvey noFilipu Y. Pendleton; i-gotquestions.org.)
Inkcazelo yeNkcazo yeBhayibhile